idh dil iyo kufsi Lawyo Cado loogu gaystay Dhalinyaro Jabouti u socotay. | Gabiley News Online
idh dil iyo kufsi Lawyo Cado loogu gaystay Dhalinyaro Jabouti u socotay.
Hargeysa(GNO)Kiiska laba hablood oo la sheegay in lagu kufsaday deegaanka Lawyacaddo ayaa laga dayrinayaa dhaqaajintiisa,waxaanaa xidhan dhawr iyo toban eedaysane oo loo qabtay falkaa, isla markaana Gudoomiyaha Gobolka Sellel ayaa la tilmaamay inuu faragelin ku hayo socodsiinta caddaalada ee kiiskaa.
Siday tibaaxeen warar ay Warbaahintu ka soo xigatay illo ku sugan Saylac iyo Lawyacaddo, waxa weli ku xidhan Saylac dhawr iyo toban nin oo loo qabtay falkaa kufsiga oo la sheegay in lagula kacay laba hablood oo ka mid ahaa dad doonayay inay u gudbaan dhinaca dalka Jabuuti 09.dec.2015, kuwaasoo ka tegay magaaladda Hargeysa.
Wuxuu intaa ku daray oo uu yidhi,“Madaxay wada duubnaayeen, ilaa shan iyo toban nin ayay ahaayeen ugu yaraan. Bakoorado iyo budhadh bay nala dhaceen labadayada wiil, ilaa ay dhulka na dhigeen oo aanu miyir beelayna hablaha umay gudbin. Labadayaduba koomaanu galay, waxaanu ku baraarugay eeddaanka salaada iyo MCH ka Lawyacaddo, kadib markaanu koomaddii ka soo noqonay ayaanu ogaanay in labada hablood la kufsaday, markii aanu warsanayna waxay nagu yidhaahdeen,’waxba naloolama hadhin’, anagana nabaradii way nagu yaallaan, wax naloo qabtayna ma jirto, wixii aanu haysanayna way naga dhaceen.”
Wiilkaa dhalinyarada ah oo ka sii hadlayaa arrintaasi wuxuu intaa ku sii ladhay oo uu yidhi;“Ehelkayaga qaar way noo yimaadeen, way nala joogaan, kiiskiina lama dhaqaajin oo waxaanu maqlaynaa waxa hor taagan badhasaabka gobolka Cabdirisaaq Waaberi Rooble. Shan iyo tobankii nin way xidhan yihiin, waanu aragnay, waxa ka mid ah nimankii na waday. Waxaanu codsanaynaa in talaabo laga qaado raggaa na dhibaateeyay ee sidaa noo galay, nimanka awoodda sheeganaya ee taageerayana nalaga qabto. Xeer ilaalintu way timi laakiin caqabaddaasaa ka hor timi oo ah Badhasaabka Sellel iyo Taliyaha qaybta Booliska.”